खगेन्द्र संग्रौला - कान्तिपुर समाचार
खगेन्द्र संग्रौलाका लेखहरु :
आन्दोलनमा आएका एकजना भाइले भने, 'नागरिक आन्दोलनमा नागरिकहरुको उपस्थिति यति पातलो किन ?' मैले भनें, 'नागरिक आन्दोलनको शक्ति नागरिकहरुको टाउको गनेर थाह हुँदैन् । नागरिक आन्दोलन प्रहरी भाइबैनीहरुको टाउको गनेर नागरिक आन्दोलनको शक्ति नापिन्छ । आज यो सभामा जति नागरिकहरुको सहभागिता छ त्यो भन्दा बढी प्रहरी भाइबैनीहरुको सहभागिता छ । तसर्थ तानशाह जब डराउँछ, नागरिकहरुको अगाडि आफूसँग भएको सबै शक्ति उतार्छ । त्यसले प्रहरी पठाउँछ, सेना पठाउँछ, ट्यांक पठाउँछ, तोप पठाउँछ । त्यसैले नागरिक आन्दोलन तपाईंहरु सबैको प्रयत्नबाट बलियो भएको छ ।'
नढाँटीकन : आफूलाई आफैँ लेख्दै, आफैँ मेट्दै
जीवन रोजेर जन्मिइन्न । छनोटको यो सौभाग्य मानिसलाई छैन । मृत्यु रोजेर मरिन्न । रोजाइको यो सुविधा पनि मानिसलाई छैन । के मानिसलाई आस्था र विश्वास, मूल्य र मान्यता वा, एक शब्दमा, विचारधाराको सचेतन एवं स्वनिर्णयकारी रोजाइको हक छ त ? दुरूह अनुभव भन्छ- छ पनि, र छैन पनि ।
अपहरित जिन्दगी !
‘रिप भान विङकिल’ कतिकति अघि पढेर बिर्सिएको पनि कतिकति भएको थियो । कोभिड–१९ ले मस्तिष्कको नेपथ्यबाट खिचेर यसलाई स्मृतिको अग्रभागमा ल्याइदियो । लगभग पाँच महिना भयो, ‘रिप भान विङकिल’ दारी हल्लाउँदै मलाई नित्य पछ्याइरहेछ ।
तारानाथ शर्मा उर्फ टीएन सरको पातालमा छु म, वासिङ्टन डीसी नजिकको सुन्दर भर्जिनिया प्रदेशमा । यहाँको मौसम र महामहिम प्रेज्डेन्ट डोनाल्ड ट्रम्पको कुनै भर छैन । हिजो बिहान म उठ्दा तापक्रम ५० डिग्री फरेनहाइट थियो, आज बिहान म उठ्दा यो लहडी नाथे स्वाट्टै २५ डिग्री फरेनहाइटमा झरेछ ।
आवेगको प्रतिक्रिया न्यायसंगत हुँदैन
प्रिय जीवन, एकाध दिनयता म भूपू ताना सर्माले न्वारान गरी नाम राखिदिएको ‘पाताल’ मा छु  । म एकाध महिना यतै बरालिने मुडमा छु  ।